Wise Care 365 Pro 2.73 Build 215 | IT Sharing Network
Wise Care 365 က ကွန်ပျူတာကို အသစ်နီးပါး မြန်ဆန်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် အပိုင်းတွေကတော့ PC Checkup, System Cleaner, System Tuneup, Privacy Protector, Wise Utilities စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်.... System Cleaner မှာ Registry Cleaner, Common Cleaner, Advanced Cleaner, System Slimming တို့ပါဝင်ပြီး System Tuneup မှာတော့ System Optimizer, Disk Defrag, Registry Defrag, Start Manager စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်တို့ ပါဝင်ပါတယ်... Pricacy Protecter မှာ Privacy Eraser, Disk Eraser, File Shredder, Password Generator စသည်တို့ပါဝင်ပြီး Wise Utilities မှာတော့ Wise JetSearch, Wise Folder Hider, Wise Data Recover, Wise Auto Shutdown, Wise Memory Optimezer စတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်ပါတယ်.... Pro Version အမြဲအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားအသေးစိပ်လေ့လာချင်ရင်တော့ www.wisecleaner.com ကို ကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်.... all-in-one PC tune-up utility software လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
System Repair Wise Care 365 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
Download ဆွဲလို့မရဘူးဗျ ပြန်တင်ပေးပါလား File Not Found ဆိုပြီးပြနေလို့